Ny ronono dia tsy azo sotroina amin'ny voankazo sivy-BALLYA
Ny ronono dia tsy azo sotroina amin'ny voankazo sivy
Posted on Aogositra 9, 2019, Nataon'i Victoria, Sokajy Ronono
Mihoatra ny 80% ny proteinina ao anaty ronono casein, toy ny amin'ny toetran'ny asidra, ny casein dia mora manangona, avy eo mora miteraka fivontosana sy fivalanana. Koa aroso tsy hihinana voankazo avy hatrany aorian'ny fisotroana ronono na vokatra vita amin'ny ronono. Voankazo vitsivitsy ary ronono manimba, ny lalao tsy mety mety hanova azy ireo ny "poizina"! Ka inona ny voankazo tsy azo hanina amin'ny ronono? Araho ny tonian-dahatsoratra hahitanao zavatra momba izany.
Ny ranom-boankazo dia zava-pisotro misy asidra, izay afaka mandoto ny proteinina ho lasa sakana mba hisy fiantraikany amin'ny fitrohana sy hampihena sakafo mahavelona. Manankarena proteinina ny ronono. Ny ando voankazo dia fotaka asidra, izay afaka mampiorina ny proteinina ho vongan-kibo, ka misy fiantraikany mivantana amin'ny fidiran'ny proteinina, mampihena ny lanja ronono mahavelona, ary mitranga koa ny fivalanana, ny fanaintainan'ny kibo, ary ny fihenan'ny kibony ary ny soritr'aretina hafa. Raha te hihinana voankazo misy asidra na misotro ranom-boasary ianao dia tokony hatao aorian'ny adiny 1
k. Ny fisotro ny ando voankazo irery dia tsy misy fiantraikany amin'ny fampidirana proteinina fa koa manakana ny fitohanana.
Ny voasarimakirana sy ny ronono dia manimba. Ny ronono dia misy otrikaina be dia be toy ny proteinina sy calcium, raha ny voasarimakirana kosa misy asidra citrika avo. Raha lanina miaraka amin'izay ny voasarimakirana sy ronono, ny asidra citrika ao anaty voasarimakirana dia hikambana amin'ny proteinina ary hikambana amin'ny kalsioma hamorona akora iray izay tsy mora levona, izay tsy mampihena ny sandan'ny sakafo ara-tsakafo fotsiny fa koa miteraka gastrointestinal tsy mahazo aina. Miezaha koa tsy hiara-hihinana ny voasarimakirana sy ronono.
Manankarena proteinina ny ronono ary asidra voankazo ny akondro. Raha miara-misakafo izy roa dia hamatotra ny fifamoivoizana izay hisy fiantraikany eo fandraisana proteinina, mitarika fivontosana tsinay.
Rehefa avy mihinana jujubes dia aza mihinana sakafo misy proteinina be eo noho eo, toy ny ronono. Satria ny vitamina C dia manahirana ny mandray ny proteinina amin'ireto sakafo roa ireto. Aza mihinana sakafo misy proteinina be rehefa avy mihinana jujube mandritra ny 1 ka hatramin'ny 2 ora.
Manimba samy hafa ny mananasy sy ronono. Ny mananasy dia voankazo misy kaloria ambany, tsy mety ny mihinana azy ronono manankarena proteinina miaraka amin`izay koa, izay mety hiteraka fivalanana.
Ny ronono sy ny Persimmon dia tsy tokony ho lanina miaraka amin'ny fotoana iray. Tsy mety ny misotro ronono ao anaty adiny 1 mialoha sy aorian'ny fihinanana «persimmon». Ny ronono dia tsy tokony hohanina miaraka amina sakafo misy asidra tannika, toy ny dite mifangaro, persimmon, sns. Ireo sakafo ireo dia mora mihetsika amin'ny ronono mba hamorona clumps ary misy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina. Ny ronono sy holatra, seleria ary tremella dia tsara amin'ny fahasalamana.
7. Myrica Rubra
Myrica Rubra dia manan-karena asidra voankazo ary ny proteinina be dia be ny ronono. Raha mihinana miaraka izy roa, ny asidra voankazo ao amin'ny Myrica rubra dia hampiorina ny proteinina amin'ny ronono ary hisy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina sy ny fihanaky ny proteinina.
8. Voankazo kiwi
Kiwifruit dia manan-karena amin'ny vitamina C dia antioksida tsara, izay afaka misoroka ny homamiadana sy ny anticancer, fa ny valin'ny klinika, rehefa avy nihinana kiwifruit, ary avy eo nisotro ronono, dia hisy ny fivalanana, ny fanaintainan'ny kibo, ny fihenan'ny kibony ary ireo soritr'aretina hafa. Ny antony dia noho ny vitamina C mifangaro proteinina amin'ny vokatra vita amin'ny ronono, izay misy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina sy ny fandraisana. Raha ny marina, ho an'ny voankazo misy vitamina C be dia be, tsy mety ny misotro ronono avy hatrany aorian'ny fisakafoanana, indrindra ho an'ireo olona marary tsinay sy vavony, mora ny mivalana.
Mihinana voasary vao avy nisotro ronono dia hisy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina sy ny fitrohana, fa koa miteraka fihenan-kibo, fanaintainan'ny kibo, ary fivalanana. Ny proteinina ao anaty ronono dia hihamafy rehefa mihaona amin'ny asidra voankazo an'ny voasary, izay misy fiatraikany amin'ny fandevonan-kanina sy ny fandraisana proteinina, ka tsy mety ny misotro ronono rehefa mihinana voasary. Raha mihinana voasary alohan'ny sakafo na amin'ny vavony foana ianao, ny asidra organika ao anaty ranom-boasary dia handrisika mivantana ny membrane mucous amin'ny rindrin'ny vavony, izay hiteraka gastritis na peristalsis gastric tsy ara-dalàna, ary hisy fiantraikany amin'ny fandevonan-kanina ny sakafo.
Hampihena ny fifantohan'ny zava-mahadomelina ao amin'ny ra izany ary hisy fiantraikany amin'ny efficacy. Tsy mety ho an'ny sasany ny mihinana fanafody tsy misy rano mangotraka, fa mampiasa ronono. Satria ny ronono dia misy kalsioma sy vy, raha ny kalsioma sy ny vy dia mety mamorona chromium marim-pototra na sira tsy vonoina miaraka amin'ny fanafody, tetracyclines, ary erythromycins, izay manahirana ny mandray ireo zava-mahadomelina ireo. lalan-dra gastrointestinal. Ary ny fanafody sasany dia hovonoin'ireto ion ireto, izay mampihena ny fifantohan'ny zava-mahadomelina ao anaty ra ary misy fiantraikany amin'ny fahombiazany.
Ny proteinina ao anaty ronono dia mamatotra ny kalsiôma sy ny fiakarana izay tsy mora entina. Ny proteinina ao anaty ronono dia casein, izay mitaky 83% amin'ny atin'ny proteinina. Rehefa ampidirina amin'ny ronono ny vovo-kalsioma, ny kasein ao anaty ronono dia hamatotra ny ion misy kalsioma, izay mampatanjaka ny ronono. Ny proteinina hafa ao anaty ronono koa mipoitra rehefa mafana, ka fady ny ronono hanampiana vovo-kalsioma.
Raha te hahalala bebe kokoa ianao izany no lahatsoratra atoro anao vakinao.